Dowlada israaiil oo raadineyso qaab ee ku joojiso codka adzanka. - iftineducation.com
Dowlada israa’iil ayaa raadineysa qaab ay ku yareyso ama ku joojiso codka adzanka masaajido badan ee ku yaalo xuduuda israel-falastin.
Arinkan ayaa soo baxay kadib markii yahuudu ay yirahdeen waxoow naga qasa hurdada.
Sida lagu qoray boga Haaretz, arbacadi (18/1, maamulka dowladda israail ee qeebta waqooyi waxey raadinaayaan teknologi ay ku ku damin karto codka adzanka.
Madaxa maamulka dowlada shacabka isra’il, Brigjen Moti Almoz ayaa waxow shirlaqaatay qubaro ku taqasusay technoligi-ga. Si loo raadiyo teknologi daminkaro qodka adzanka si otomatis ah dhinaca dowlada falastin.
Madadxda maamulka dowlada israil ayaa waxey qabaan inaan la weydiisan wax ogolaasho ah dowlada falastin. “Dowlada falastin wey soo dhaweyneysa arinkan, maxa yelay dad badano falastiini ah ayaa dhibsaday ayagana.” waa sidey hadalka u dhigeen yahuuda.
Bishi lasoo dhaafayay madax ka tirsan dowlada israil ee kasocda xisbiga Yisrael Beiteinu, Anastassia Michaeli ayaa waxow soo bandhigeen tastuur cusub oo mamnuucaayo codka adzanka masjidka. Dastuurkan ayaa marka hore waxaa taageersanaa ra’isul wasaaraha Benjamin Netanyahu, laakiin ugu danbeyntii waa ku guuldareesteen kadib markey kasoo horjeesteen madax kale ee katirsan xisbiga Likud.
Deegaanada Hebron, yahuudu waxey ugu jawaabayeen codka adzanka iney yeeriyaan musik kor loo dheereeyay codkiisa ee dhaqanka yahuuda ah. inkastoo ugu danbentii ay joojisay wasaarada dayeelka deegaanka.